Ilhaan Cumar: “Trump wuxuu halis ku yahay dadka iyo dalka Mareykanka” | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Ilhaan Cumar: “Trump wuxuu halis ku yahay dadka iyo dalka Mareykanka”
Ilhaan Cumar: “Trump wuxuu halis ku yahay dadka iyo dalka Mareykanka”
Xilli ciidamada dembi baarista Mareykanka ay wali ku raad joogaan dadkii weeraray aqalka Kongareeska, ayaa dhanka kale isla xubnaha Dimuqraaddiga ee ka tirsan aqalkaasi waxay sheegeen inay ku raja weyn yihiin xil ka qaadista madaxweyne Trump.
Hadalkan ayuu ku sheegay warqad uu u qoray Afhayeenka Aqalka Nancy Pelosi, iyadoo la doonayo in cod loo qaado qaraar madaxweyne ku xigeenka loogu borrinayo inuu sidaas sameeyo. Taasi waxay ka dhigan tahay inay u dhowdahay in Aqalka Wakiillada ay hakin doonaan cod u qaadidda in xilka laga qaado madaxweyna.
Hase yeeshee, waxaa sii xoogeysanaya abaabulka loogu jiro xil ka qaadista Madaxweyne Trump, iyadoo ay xildhibaanno badan oo Jamhuuriga ka tirsan sheegeen inay u codeyn doonaan xil ka qaadista madaxweynaha.
Aqalka Wakiillada ayaa qorsheynaya inay maanta u codeeyaan xil ka qaadista Trump, taas oo ka dhigeysa madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka ee labo jeer laga gudbiyo xil ka qaadis.
Waxaa lagu wadaa in 20-ka bishan uu xilka madaxtinnimada kala wareego Joe Biden, oo xisbiga Dimuqraaddiga ka tirsan.